Hutano – Page 2 – 263AfricaNews-Patrick_Manase
August 22, 2017 c263afri 0 Comments
Mudzimai wevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaSimon Muzenda, Amai Maud Muzenda vanonzi vashaya nhasi. Amai Muzenda vainge vari mukoti uye vasiya vana vanomwe. Originally posted on VOA Shona
Vechidiki vanorarama nehutachiona hweHIV/AIDS vachishanda nesangano rakazvimiririra reAfricaid Zvandiri vatanga chirongwa chekufamba mudzimba dzine vechidiki vachivakurudzira kuongororwa ropa. Originally posted on VOA Shona
August 14, 2017 c263afri 0 Comments
Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa avo vanonzi vari kurwara nemudumbu vanonzi vakaendeswa nechimbi chimbi nendege kuchipatara chekuSouth Africa. Originally posted on VOA Shona
Vagari vemuKariba Vooneswa Chitsvuku neMakudo
August 11, 2017 c263afri 0 Comments
Vagari vemuKariba vanoti havachina mufaro sezvo vari kuoneswa chitsvuku nemakudo, ayo ari kurura zvekupinda mudzimba dzavo. Originally posted on VOA Shona
Madzimai akawanda muKariba anoti anogamuchira nemufaro chirongwa chekuronga mhuri pachishandiswa nzira dzakasiyanasiyana chiri kutungamirwa nesangano reZimbabwe Population Services, (PSI). Originally posted on VOA Shona
August 7, 2017 c263afri 0 Comments
Vesangano reNational AIDS Council (NAC) vanoti vari kutsutsumwa nenyaya yekuti vemahotera havachabvumidzwa kupa makondomu pachena kuvanhu vanopinda mumahotera avo senzira yekudzivirira kupararira kweHIV. Originally posted on VOA Shona
Vagari vekwaMutare vari kunyunyuta zvikuru nekuvharirwa mvura kwavari kuitirwa nekanzuru yeguta iri zvichitevera kutadza kwavo kubhadhara mari yemvura. Originally posted on VOA Shona